स्पेनमा सिधा आदेशहरू: द इन्ट्रीटिव मूड
सीधा आदेश: स्पेनिश मा Imperative मूड को प्रयोग
केहि अनियमित रूपहरू सिक्न सजिलो बनाउन सजिलो बनाउँछ
क्रियाहरू को लागि प्रयोग गरिने क्रियाकलाप फारम, स्पेनिश मा एक अधिक असामान्य क्रिया फारम मध्ये एक हो। एक विशिष्ट conjugation को रूप मा , यो केवल tú र vosotros संग मौजूद छ, यो परिचित दोस्रो व्यक्ति मा छ । विभिन्न conjugations कहिलेकाहीँ सकारात्मक मा प्रयोग गरिन्छ (केहि गर्नुहोस्) र नकारात्मक (नगर्नुहोस्)। र किनकी सीधा आदेश कहिलेकाहीं अशिष्ट वा अपमानजनक आवाज हुन सक्छ, अनिवार्य रूप कहिलेकाहीँ अन्य क्रिया निर्माणको पक्षमा पर्दछ।
क्रियाहरूको आवश्यक फारम जान्न सजिलो छ। नियमित क्रियाकलापका लागि, परिचित प्रभावकारी अनिवार्य (जो एक tú र vosotros संग जान्छ) मात्र अनन्तको अन्तिम पत्र ( R ) छोडिन्छ, क्रियाकलापहरू को बाहेक अन्त्यमा समाप्त हुन्छ, कुन समाप्तिमा परिवर्तन हुन्छ -e ; बहुवचनमा, अनन्तको अन्तिम पत्र डीमा परिवर्तन गरिएको छ। (तल उदाहरणहरू हेर्नुहोस्।) यो त्यहाँ छ। औपचारिक र नकारात्मक आदेशहरूको लागि, उपोज्यात्मक conjugation प्रयोग गरिन्छ।
आवश्यक फारम बिना विषय बिना अंग्रेजीमा अज्ञात क्रियाको प्रयोगको बराबर छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईलाई कसैलाई अंग्रेजीमा हेर्नु भएको छ भने, आदेश मात्र "हेर्न" छ। स्पैनिश समकक्ष मिरर , मेर , मिनाड वा म्यानिन हुन सक्छ, जसको आधारमा तपाइँ बोल्दै हुनुहुन्छ।
शब्दहरुका लागि सिधा आदेशहरू
( Hablar को उपयोग गरेर, बोल्न को लागी, उदाहरण को रूप मा):
singular familiar: hablatú, no habl es tú (बोल्ने, बोल्दैन)
एकल औपचारिक: habl र उड।, कुनै habl र उड। (बोल्नुहोस्, बोल्दैन)
बहुवचन परिचित: आदम विज्ञापन vosotros, कुनै habl éis vosotros (बोल्ने, बोल्दैन)
बहुवचन औपचारिक: habl en Uds।, no habl en Uds। (बोल्नुहोस्, बोल्दैन)
ध्यान दिनुहोस् कि विशिष्ट अनिवार्य फारम केवल परिचित सकारात्मक सल्लाहका लागि प्रयोग गरिन्छ। अन्य अवस्थामा, हालको उपजीव conjugation प्रयोग गरिन्छ।
उस्तै शब्दहरु को लागि सही हो - and --ir verbs।
शब्दहरूको लागि सिधा आदेशहरू
( कमेन्ट प्रयोग गर्दै, खानको लागि, उदाहरणको रूपमा):
एकल परिचित: cometú, no com को रूप मा तपाइँ (खान, खाँदैन)
एकल औपचारिक: comaउड।, no comaUd। (खाए, खाँदैन)
बहुवचन परिचित: com ed vosotros, no com áos vosotros (खान, खाँदैन)
बहुवचन औपचारिक: com an Uds।, no com an Uds। (खाए, खाँदैन)
( escribir को प्रयोग गरी, लेख्नको लागि, उदाहरणको रूपमा):
एकल परिचित: escribetú, कुनै escrib tú (लेख्नुहोस्, नलेख्नुहोस् )
एकल औपचारिक: escribaउड।, no escribaउड। (लेख्नुहोस्, लेख्नुहोस्)
बहुवचन परिचित: escrib आईडी vosotros, no escrib áos vosotros (लेख्नुहोस्, लेख नगर्नुहोस्)
बहुवचन औपचारिक: escrib an Uds।, no escribaUds। (लेख्नुहोस्, लेख्नुहोस्)
उपन्यासहरू स्पष्टताका लागि उपरोक्त चार्टहरूमा समावेश छन्। परिचित pronouns ( tú र vosotros ) सामान्यतया वास्तविक प्रयोगमा छोडिन्छ जबसम्म स्पष्टता वा जोड आवश्यक पर्दछ, जबकि औपचारिक अभिव्यक्तिहरू ( usted and usteses ) लाई प्रायः प्रयोग गरिन्छ।
Imperataive Mood को प्रयोग को लागि5युक्तिहरु
आवश्यक प्रयोग को उचित सीधा छ। यहाँका घटनाहरूको लागि यहाँ केही दिशानिर्देशहरू छन् जुन यसको प्रयोग स्पष्ट हुन सक्दैन:
एकल सकारात्मक परिचित परिचित ( ट्यूउ संग प्रयोग गरिएको) सामान्यतया नियमित हुन्छ। अनियमित क्रियाकलाप यी आठ हो, साथै ती शब्दहरू बाट व्युत्पन्न शब्दहरू: decir (भन्न), di ; hacer (बनाउन वा गर्न), haz ; ir (जाने), ve ; poner (राख्नु), पोन ; सालिर (छोड्ने), साल ; ser (to be), sé ; टनेर (हुनु), दस ; venir (आउन), ven । सबै क्रियाकलापहरू बहुवचन सकारात्मक परिचित अयोग्यमा नियमित छन्।
लोटस अमेरिकामा vosotros आदेशहरू rarely प्रयोग गरिन्छ। सामान्यतया, बच्चाहरु वा आफन्तहरु संग कुरा गर्दा ustedes फारम प्रयोग गरिन्छ।
वस्तु अनुमोदन र रिफ्लेक्सिभ अभिनेताले सकारात्मक सल्लाहहरू र पूर्वनिर्धारित आदेशहरूसँग संलग्न छन्। डेम। (मलाई भन्नुहोस्।) म डाइरेक्ट छैन। (मलाई नबिर्सनुहोस्।) Escríbeme। (मलाई लेख्नुहोस्।) म मलाई एस्पिसस छैन। (मलाई लेख्न नदिनुहोस्)। तपाईले देख्न सक्नुहुँदा, जब एक pronoun जोडिएको छ भने एकदम उच्चारण गर्न को लागी क्रियामा थप्न आवश्यक पर्दछ। यदि त्यहाँ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष वस्तु हो भने , अप्रत्यक्ष वस्तु आउँछ। Démelo। (यो मलाई दिनुहोस्।) म पनि छैन। (मलाई यो नदिनुहोस्।)
लिखित निर्देशहरूमा, सुन्न वा औपचारिक फारमहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, टोनमा निर्भर गर्दछ जुन लेखकहरूसँग कुराकानी गर्न चाहन्छन्। परिचित रूप सामान्यतया मित्रताको रूपमा आउँछ। हज clic aquí। (यहाँ क्लिक गर्नुहोस।) यस कम्पैक्ट डिस्क देखि नमूना पटरिहरु। (यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।) एक अव्यवस्थित आदेश पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
केही लेखकहरूले तिनीहरूका आदेशहरू संकेत गर्न मद्दतको लागि विस्मयादिबोधक बिन्दुहरूका बीच आदेश राख्छन्। यस तरिकामा प्रयोग गर्दा, विस्मयादिबोधक चिह्नहरूलाई अंग्रेजीमा लिखित अनुवाद गर्न आवश्यक छैन। ¡Escucha! (सुन्नुहोस्)
जर्मन विराम चिन्ह Zeichensetzung विराम चिह्न 1 भाग
फ्रान्सेली उपन्यास ~ नम्स
त्यसपछि बनाइयो भन्दा - के फरक छ?
पहिलो वा दोस्रो सशर्त?
इटालियन Verb Conjugations: Girare
रिफ्लेक्सिभ शब्द र उच्चारण
कसरी कन्जुगेट "ग्रैंडिर" (बढ्नको लागि)
कसरी कन्जुगेट "एपलर" (कल गर्न)
केक छनौट गर्नुहोस्
हल्का दुर्लभ पृथ्वी तत्वहरू (LREE)
बेस्ट र वर्थ युद्ध सिनेमा प्रशांत थिएटर को बारे मा II द्वितीय विश्व युद्ध मा
कसरी तातो बकिङ पाउडर र तातोपानीको लागि बेकिंग सोडा
तपाईं प्रायः कदर गर्न जानुहुन्छ?
10 Hilariously Bizarre Rap रेज
AME चर्च विश्वास र व्यवहार
तपाईंको शब्दावली को निर्माण: उपसर्ग
द अमेरिकन लोक संगीतको इतिहास
के किन बलहरू सीमाहरू बाहिर छन्?
फ्रेंचमा 'Je Suis Plein' को प्रयोग गर्न सिक्नुहोस्
ईश्वरीय नैतिकता: ईश्वर वा धर्म बिना राम्रो भएको सम्भव छ
हाउस डरावनी दास्तां
एक 3D पिरामिड परिप्रेक्ष्यमा राख्नुहोस्
व्यापार मार्गहरूको लागि Racking Gear
प्राचीन नजिकैको नक्साहरू
Adolph हिटलरको चित्र
साइट गठन प्रक्रियाहरू - त्यो पुरातत्व स्थल कसरी भयो?
फ्लैट पृथ्वीमा मध्यकालीन व्यक्तिले विश्वास गरे?
स्तनपानमा इस्लामी दृश्यहरू
सङ्गीतमा कस्तो उपाय छ
फ्लोबोर्डबोर्ड पूर्ण समीक्षा (32 ", 36", 42 ")
रैखिक समीकरणको प्रणाली कसरी हल गर्ने